Fiandohana vaovao ho an'ny fizahan-tany, fanatanjahan-tena ary fandriam-pahalemana any amin'ny saikinosy Koreana
Home » Lahatsoratra farany farany » malaza ankehitriny » Fiandohana vaovao ho an'ny fizahan-tany, fanatanjahan-tena ary fandriam-pahalemana any amin'ny saikinosy Koreana
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • fanabeazana • Vaovaom-panjakana • Zon'olombelona • Vaovao farany momba ny Korea Avaratra • tompon'andraikitra • Vaovao farany momba ny Korea Atsimo • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Ho an'i Korea Amin'ny Fitiavana. Ny ankamaroan'izao tontolo izao dia nifoha tamin'ny 18 septambra tamin'ny vaovao feno fanantenana fa nivory tao Pyongyang ireo mpitarika any Korea Avaratra sy Atsimo. Ny làlana mankany amin'ny fandriam-pahalemana matetika dia lava sy sarotra, ary ny fizahan-tany amin'ny fanatanjahantena sy fanatanjahantena dia mampianatra antsika fa tsy misy azo raha tsy misy ny fanazaran-tena sy ny asa-tanana. Raha afaka manampy ny vahoaka any Korea ny fizahantany ara-panatanjahantena mba hanakaiky ny fandriam-pahalemana dia hivoaka ho mpandresy izao tontolo izao.
Ho an'i Korea amin'ny fitiavana: Nifoha tamin'ny 18 septambra ny ankamaroan'izao tontolo izaoth amin'ny vaovao misy fanantenana fa nivory tany Pyongyang ireo mpitarika any Korea Avaratra sy Atsimo. Ny talata hariva ny filoha Koreana Tavaratra Kim Jong Un dia niarahaba ny filoha koreana tatsimo Moon Jae-in. Tonga ny Filoham-pirenena Koreana Tatsimo mba hifanakalo hevitra momba ny fiafaran'ny ady tany amin'ny saikinosy Koreana. Na dia tsy misy afaka maminavina ny ho avy aza, ny zava-misy fa miteny sy mitady endrika Modus Vivendi ireto mpitarika roa ireto dia vaovao tsara tsy ho an'ny olona ao amin'ny saikinosy Koreana ihany fa ho an'izao tontolo izao koa.
Amin'ny ho avy, ny mpahay tantara dia mety hiady hevitra izay tompon'andraikitra amin'ity fahotan'ny politika ity. Tokony ho any amin'ny Filoham-pirenena Moon Jae-in ve ny filoha amerikana Donald Trump sa izy roa? Ny famakafakana ireo zava-niseho ireo dia mety ho foto-kevitr'ireo dokotera amin'ny ho avy.
Ny fantatsika dia ny fizahan-tany sy ny fanatanjahantena dia nitana andraikitra lehibe tamin'ny fakana an'izao tontolo izao hiala ny sisin'ny ady ka hatrany amin'ny sisin'ny fandriampahalemana.
Tsy azontsika atao ambanin-javatra ny anjara asan'ny fizahantany amin'ity hetsika manan-tantara ity, ary mety amin'ny alàlan'ny fizahan-tany ara-panatanjahantena no ahazoana fandrosoana fanampiny.
Ny fizahantany ara-panatanjahantena dia manome ny Koreana roa fotoana hifaneraserana. Ny hetsika ara-panatanjahantena dia mamela ny ekipa hifaninana amin'ny kianja filalaovana fa tsy amin'ny ady. Izy io dia mamela ny hambom-pirenena nefa tsy handratra ny andaniny.
Ny hetsika ara-panatanjahantena sy fanatanjahantena dia mety ho lakilen'ny fandriampahalemana any amin'ny Saikinosy Koreana. Betsaka ny antony mahatonga ny fizahantany ara-panatanjahantena ho fitaovana ho an'ny fandriampahalemana. Anisan'izany ireto:
Ny hetsika ara-panatanjahantena dia manome antony hifankahalalan'ny mpankafy sy hahatakarany ny fihetsika sy ny ilain'ny ankilany
Ny hetsika ara-panatanjahantena dia mamela ny firindrana sy ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena
Ny hetsika ara-panatanjahantena dia mitaky fiaraha-miasa sy fiaraha-miasa amin'ny sehatra fototra toy ny fitantanana loza sy filaminana
Ny fiaran'ny fizahan-tany ara-panatanjahantena dia hanana anjara toerana lehibe amin'ny fitondrana ireo fitahian'ny fiaraha-miaina am-pilaminana tsy ho an'ny olona any Korea ihany fa ho an'izao tontolo izao koa. Mba hahatratrarana an'io tanjona io dia ilaina ny manomboka manomana avy hatrany. Tsy tokony hiandry fifanarahana fandriam-pahalemana ny Koreana fa hampiasa ny fiaran'ny fanatanjahan-tena hanatanterahana izany tanjona izany. Ireto ambany ireto ny sasany amin'ireo fomba azon'ny Koreana ampiasaina ny fizahan-tany ara-panatanjahantena ho fitaovana hitondra any amin'ny Saikinosy Koreana milamina sy miroborobo kokoa
Mametraka fandriampahalemana iraisam-pirenena ampahibemaso tsara amin'ny alàlan'ny kaonferansa fizahan-tany ara-panatanjahantena.
Ny tanjon'ireo kaonferansa dia:
Hiatrehana ny olana ara-piarovana sy fiarovana amin'ny mpizahatany
Manampy ny mpiambina ny fizahantany hamorona fandriam-pahalemana amin'ny alàlan'ny fiarovana sy filaminana
Mamokatra haino aman-jery manamafy ny fizahantany ho toy ny fitaovana fandriam-pahalemana sy filaminana
Mampivondrona ireo firenena hampivelatra ny fifaninanana ara-pahasalamana sy ara-pilaminana amin'ny alàlan'ny fizahan-tany
Mamorona fotoana ara-toekarena
Mamorona fahefana ara-panatanjahantena "Koreana rehetra"
Mamorona fampianarana fiofanana ho an'ny polisy momba ny fizahan-tany ary omeo fanamarinana iraisam-pirenena ny Polisin'ny Fanatanjahantena Koreana
Mamorona vondrona miasa amin'ny lohahevitra toy ny fitantanana loza. Ireo ekipa miasa ireo dia hiresaka lohahevitra toy ny:
Ny fitantanana ny krizy sy ny media
Fiatrehana teboka ara-politika amin'ny fizahan-tany.
Miatrika fanamby ara-toekarena sy tontolo iainana
Fampidirana ireo fitsipika momba ny fitantanana risika amin'ny fiantohana ny fizahantany
Olana amin'ny heloka bevava amin'ny fizahantany, fampihorohoroana amin'ny fizahan-tany
Fitazonana ireo toerana manan-tantara azo antoka
Fizahantany ho fitaovana hamoronana fahatakarana iraisam-pirenena tsara kokoa
Fizahantany ho tetezana mankany amin'ny fampandrosoana fandriam-pahalemana
Ankoatry ny hetsika avo lenta farany teo, “eo ambanin'ny fomba radara” amin'ny fandraisana anjaran'i Korea roa amin'ny fankalazana miaraka amin'ny fanatanjahan-tena sy ny Bambu. Tian'ny Koreana ny natiora.
Fankalazana toy ny Fetiben'ny Bambu Damyang hisarika ny saina sy hanampy ireo toerana fizahan-tany misongadina toa an'i Damyang. Mandritra izany fotoana izany dia mamela ny fanatanjahan-tena sy ny fiaraha-mientana hifaneraserana.
Any amin'ny ala mikitroka 2.4 kilometatra no misy ity festival ity dia feno hetsika fankalazana ny hatsarana sy ny fiasan'ny zavamaniry volotsangana. Ireo mpitsidika mavitrika kokoa dia afaka mitsapa ny fahaiza-manaon'izy ireo mandritra ny fanatanjahantena renirano natokana ho an'ny festival, toy ny 'Log Rafting' sy 'Water Bicycling'. Aorian'ny fikolokoloana sakafo dia azon'ny mpitsidika atao ny mampifaly ny lanilaniny miaraka amin'ny sakafo masaka ao Damyang sy sakafo hafa manerantany nasongadina tao amin'ny Ivotoerana niainana ny kolontsaina.
Any Korea Avaratra, ny hazakazaky ny sambo Dragon dia malaza any Korea Avaratra tahaka ny any Shina, miaraka amin'ny Fetibe Dragon Boat fanao isan-taona amin'ny fiandohan'ny lohataona amin'ny volana Jona. Ny fitsidihana ny hetsika lehibe any Pyongyang nataon'ny Delegasiona Koreana Tatsimo dia mety hiteraka hafatra matanjaka momba ny finamanana mampiorina ny tenany.
Ny làlana mankany amin'ny fandriam-pahalemana matetika dia lava sy sarotra, ary ny fizahan-tany amin'ny fanatanjahantena sy fanatanjahantena dia mampianatra antsika fa tsy misy azo raha tsy misy ny fanazaran-tena sy ny asa-tanana. Raha afaka manampy ny vahoaka any Korea ny fizahantany ara-panatanjahantena mba hanakaiky ny fandriam-pahalemana dia hivoaka ho mpandresy izao tontolo izao.
Ny mpanoratra Dr. Peter Tarlow dia manam-pahaizana iraisam-pirenena momba ny dia, fizahan-tany ary fiarovana.
Ny fampahalalana bebe kokoa momba ny Programa momba ny fizahantany fizahan-tany dia mankany http://certifiedforsafety.com/